Kudengenyeka kwenyika Kwakasimba 6.1 kunorova nzvimbo yeTokyo, pasina yambiro yetsunami
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Kudengenyeka kwenyika Kwakasimba 6.1 kunorova nzvimbo yeTokyo, pasina yambiro yetsunami
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hakuna njodzi yetsunami muJapan mushure mekudengenyeka kwenyika, asi vezvematongerwo enyika vanonyevera nezve mukana wekudengenyeka kwenyika kune simba.
Imwe yambiro yekukurumidzira yakaenda mumigwagwa guta guru reJapan sezvo kudengenyeka kwenyika kwakasimba kwakazunungusa Tokyo.
Nzvimbo huru yezvivakwa zvepasi pevhu yaive pamuganhu weTokyo neChiba matunhu.
Pakange pasina chakaipa chakataurwa kubva kuTokai Nha. 2 simba renyukireya muIbaraki Prefecture padyo neTokyo.
The Japan Meteorological Agency yakashuma kuti kudengenyeka kwenyika kune simba kwakakura kusvika ku6.1 kwakazunungusa nzvimbo yeguta reTokyo nhasi.
Epicenter yekudengenyeka kwepasi pevhu yaive pamuganhu we Tokyo uye Chiba matunhu, pakadzika kwemakiromita makumi masere.
Zvivakwa zvakazununguka muguta guru reJapan sezvo yambiro yekukurumidzira yakaenda mumigwagwa.
Pakange pasina chakaipa chakataurwa kubva kuTokai No. 2 simba renyukireya muIbaraki Prefecture padhuze Tokyo, akadaro.
Hapana kufa, kukuvara kana kukuvara kwechimiro kwakakonzerwa nekudengenyeka kwenyika kwakataurwa kusvika pari zvino.